Usuku Lwezithandani | May 2022
Izipho eziBalaseleyo zoSuku lweValentine ezi-55 zaKhe-Izipho ezithandwayo zoMfazi okanye zeNtombi
UFebruwari 14 usondela msinyane kunokuba ucinga, kodwa ungakhathazeki- uya kuphumelela intliziyo yakhe ngesinye sezipho zoSuku lweValentine oluqwalaselweyo lwabasetyhini.
I-40 yoSuku lweValentine yoSuku lweZandla- Iimbono ze-DIY zokwenza uSuku lweValentine
Yenza olu suku lukaValentine lube lolona lubalaseleyo kodwa (okanye ezimbalwa!) Ezi zimvo zoSuku lweValentine ziyonwabisa kubantu abadala kunye nabantwana ukuba bazame ekhaya.
Izipho eziBalaseleyo zoSuku lweValentine ezingama-55 kuye 2021-Ezona Zona Mvo ziBalaseleyo zeValentine yaMadoda
Nokuba uhamba ukhenketho, ubhiya wobugcisa, ezemidlalo, umculo, ukupheka, itekhnoloji, okanye enye into ngokupheleleyo, sikugubungele ngezi zipho zoSuku lweValentine kumadoda.
Imihlobiso engama-21 yoSuku lweValentine yoSuku lweeValentine- Eyona mibono mihle yokuzihombisa yasekhaya ngoSuku lweValentine
Ukuba ubhiyozela i-Cupid kwaye ufuna ukuseta imo yothando ngaphandle kwe-cheesy (okanye ukuchitha ngaphezulu), sebenzisa le mibono yomhombiso woSuku lweValentine.
Amakhadi oSuku lweeValentine eziMnandi ngo-2021 - Amakhadi amaValentines amaCustoms okuThenga
Nokuba ujonge ukubenza bahleke okanye bakhale (iinyembezi ezonwabileyo!), La makhadi oSuku lweValentine acingayo athetha konke.
Sukujonga nje kwisithandwa sakho olu Suku lweValentina- DIY sisipho sosapho kunye nabahlobo, naso. Ezi zimvo zingama-35 zezipho zilungele wonke umntu okuluhlu lwakho.
Iibhokisi ezili-10 ezigqwesileyo ze-DIY Day Day ngo-2018-Ibhokisi yoSuku lwe-Valentine yokuzenzela
Sineerobhothi, ii-unicorn, kunye neenyosi ezi-bumble zonke apha kwaye zibalwa.
Ukusuka kumazwi eNkosi Byron ukuya kuMahatma Gandhi ukuya kuReese Witherspoon, ezi ngcaphuno zothando ziqinisekile ukwenza isithandwa sakho swoon.
Iifilimu zoSuku lweValentine ezingama-35 + ukubukela lo nyaka-iiMovie eziBalaseleyo kwezothando
Ezi bhanyabhanya zoSuku lweValentina-ezinye iziqhulo, intlekele-ziya kuba nazo zonke iimvakalelo (kwaye ngamanye amaxesha zimbi-zinyembezi ziye kungena kwengubo yakho edityanisiweyo engaphezulu). Ke hlala phantsi, uphumle, kwaye ulungiselele ezo zihlunu!
Izimvo zothando ngeSidlo sangokuhlwa ezimbini - Izimvo zokutya zosuku lweValentine
Ukubetha ezi ndlela zokupheka zimnandi zeSuku lweValentine ukuze uchukumise ezinye zakho ezibalulekileyo.
Izimvo zeValentine's Day Party -Imisebenzi yoSuku lweGalentine
Ngokuqinisekileyo, kunokuba yitshizi, kodwa uSuku lweValentine luyenzeka njengesizathu esifanelekileyo sokufumana abahlobo bakho kunye nabantu obathandayo kunye. Nazi izimvo zepati yeentsuku ezili-10 zokuqinisekisa ukuba wonke umntu uziva uthando.
Iziphuzo zoSuku lweValentine ezingama-20 + -Iresiphi yeCocktail yoSuku lweValentine
Usuku lukaValentine lubiza isiselo esikhethekileyo kunye nenye ebalulekileyo. Ukusuka kwi-apple sangria ukuya kwitshokholethi abagubungeleyo, nazi iiresiphi ezingama-24 ezilula zokubhiyozela olona suku luthandwayo lonyaka.
Igumbi lokuhlambela izimvo zetayile zeceramic
Izimvo zesikimu sombala wekhitshi
Uyilo lwangoku lwegumbi lokulala
ubugcisa kwigumbi lokuhlala